Isingeniso KuLo Gong Gong - iPericardium 8
I-Acupressure Treasures: Lao Gong - iPericardium 8
I-Lao Gong yindawo yokucima umzimba (i-Pericardium 8) kunye ne-chakra encinci phakathi kwesandla sandla, esetyenziswa rhoqo ngabagqirha bamandla okuphulukisa amandla.
I-Lao Gong & I-Energy-Healing
Amathambo aseTao kunye namanye amagqirha enamandla abasebenzisa i-qigong emission (zangaphandle zonyango) ubuchule bokukhulisa nokulinganisela enye ye-qi (amandla okuphila ngobomi) kaninzi basebenzisa iintende zezandla zabo njengendawo yokukhupha amandla.
Kwaye uye wambona iifoto, ukuba awunakwenzeka kumntu, abangcwele kunye nabaphili bezithethe ezahlukahlukeneyo zokomoya ezinika iintsikelelo zeqela ngokukhulisa iintende zezandla zabo ekukholeni kwabo abazinikeleyo. Yintoni eyenziwa apha?
I-Lao Gong - I-Palace Of Labor
Njengoko kuvela, itende lesandla likhaya kwelinye lamanqaku asebenza ngamandla kakhulu, acatshangelwa nokuba yinto encinci ye- chakra . Igama lesiTshayina lale ngongoma yiLao Gong, kwaye yile ngongoma-8 kwi-Pericardium meridian . "Gong" kuthetha ithala, kwaye "uLool" lithetha umsebenzi okanye usebenza; ngoko igama legama lidla ngokuguqulelwa ngokuthi "ibhotwe lokubhokoxa" okanye "ibhotwe labasebenzi."
I-Pericardium 8 ingaba yabizwa ngokuba yi "bhotel of labor" ngenxa yezizathu eziqhelekileyo: kuba izandla ziyingxenye yomzimba esetyenziswa rhoqo ukubandakanya umsebenzi wezandla. Ingcaciso ecacileyo ngakumbi kukuba, ngokutsho kweNkqubo yesihlanu yakwaSen , intliziyo yindawo yokuhlala "yombusi" kuyo yonke into.
Ekubeni i-pericardium isigxoko esivimbayo kwaye siyikhusele intliziyo, sinokuyicinga kwakhona njengentliziyo (kunye nomlawuli) "isigodlo," umsebenzi wakhe (okt labasebenzi) kukududuza nokukhusela ukumkani.
I-Pericardium 8 - Indawo
Indawo yeklasi yeli nqanaba apho iphoyinti lemiqatha yomnwe, entendeni yesandla, xa senza intonga (okt phakathi kwethambo lesithathu kunye ne-4 metacarpal).
Ezinye iicatshulwa zanamhlanje zichaza indawo ekuyo kuyo indawo apho umgca we-finger middle uhlala khona xa senza intonga (oko kukuthi phakathi kweyesibini kunye neyesithathu amathambo emetacarpal). Ungasebenzisa nayiphi indawo okanye intlangano - kuxhomekeke kwinto enokuyithatha intuitively.
Njengoko kuchazwe ngasentla, i-Lao Gong isetyenziswe kuzo zonke iintlobo zendlela, kwimeko yokuphulukiswa kwe-qigong - njengendawo apho ukuphuma khona kumntu omnye ukuya komnye umntu. Izibonakaliso zaso zodidi lwe-acupuncture (oko kukuthi umphumo wokuvuselela umzimba wethu) ziquka ukuthoba umoya nokuxazulula ukukhathala.
Indlela Yokuqalisa I-Lao Gong
Ukuze uhlaziye i-Lao Gong, gcina kuphela isandla esisodwa, isundu, kwiminwe yesundu kwesinye isandla. Emva koko, sebenzisa isalathiso sesandla esezantsi ukuze ufinyelele entendeni yesandla esiphambili. Faka isicelo soxinzelelo lwemodareyitha, kunye nesiphelo okanye isalathiso sesithupha sakho, uyishukumisela kumabindi amancinci, njengoko ubeka ingqalelo yengqondo yakho kwinqanaba.
Enye indlela yokwenza amandla e-Gong Gong ukubeka iintendelezo zezandla zakho ndawonye "kwindawo yokuthandaza" phambi kwentliziyo yakho. Bese uhlukanise iintendelezo nje nje, ngoko kukho malunga ne-intshi ubude phakathi kwabo. Xa uqwalasela ngokunyamekileyo kwisithuba phakathi kweentende, qala ukuhambisa izandla zakho ezimbini kwiincinci ezincinci, ugcine umgama ophakathi kwee intshi.
Phawula oko uvakalelwa.
Emva koko, ngokukhawuleza, kwindlela yokutshangatshangisa, gudula izandla zakho, kude kube neendawo ezintlanu okanye ezintandathu eziphakathi kwazo; uze ucindezele kwakhona emva komnye nomnye, de kube phantse kodwa engachukumisi. Phinda le ntshukumo, izihlandlo ezilishumi okanye ezilishumi elinesihlanu (kunye namehlo akho avule okanye avaliwe), ngqalelo yakho, kwakhona, kwithuba phakathi kweentendelezo, oko kukuthi phakathi kwamaphupha amabili e-Lao Gong.
Mhlawumbi uza kuqala ukuphawula ukutshisa okanye ukubetha, okanye ukuva ubunzima (okanye ukukhanya), okanye ukuvakalelwa kwamagnetic okanye okufana ne-taffy ngaphakathi naphakathi kweentende zezandla zakho. Oku, ubuncinci kwinqanaba, kukusebenza kwamaphupha e-Lao Gong.
Emva kokuba akho amaphupha aseLao Gong asebenze ngale ndlela, ungasebenzisa i-Qi (amandla obomi bokuphila) ephuma kwiintendelezo zezandla zakho ukuze ukondle, uxhasane kwaye uhambelane neQi yabangani bakho nabaxhasi, ngokusebenzisa iindlela ezithile zokuphulukisa i-qigong, okanye "ukubeka izandla" enembile.
Ubulumko kunye nobuwula kwi-Social Media
Prajna okanye Panna eBuddhism
Khanyisa kwiMentos emnyama kunye neTyic Water Water
Ikholeji yeNyakatho-ntshona ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Indlela yokwenza i-Handstand epheleleyo
Uhlobo lokuHlola lokuBala kwiKholeji: Indlela yokuhlala kwiNdlela
Kuphi ILizwi "Iphepho" livela?
UHarriet Tubman kwi-Bill Twenty Dollar Bill
IziGenesis, iimpawu kunye noMthetho we-Mendel woNyulwa
Iikhowudi ezilula kwiGititar
Xa Usebenzisa I-Mood Form